2018 July | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူပေ – သန်းကြွယ်သူဌေး အခွန်ကြောင့်ပြေးတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား
မောင်လူပေ – သန်းကြွယ်သူဌေး အခွန်ကြောင့်ပြေးတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၈ စတန်းဖို့ဒ်စင်တာရဲ့ ဆင်းရဲမှုနဲ့မညီမျှမှုလေ့လာရေးအဖွဲ့(Stanford Center for Poverty and Inequity) မှ ချားလ်ဗာနာ(Charles...
အေးငြိမ်း ● ဧဝံမေသုတံ
အေးငြိမ်း ● ဧဝံမေသုတံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော် စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသားဘဝက ဆရာကြီး ဆန်းထွန်း (မန်းတက္ကသိုလ်) ၏ စာပေဟောပြောပွဲကို ကျောင်းတွင် နားထောင်ခဲ့ရပါသည်။ ကြာပြီဆိုတော့ အားလုံးကို...
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက် ၁၉ နှစ်ပြည့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက် ၁၉ နှစ်ပြည့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၈ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ထူထောင်ခြင်း ၁၉ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်...
ကာတွန်း စည်သူကျော်ရဲ့ ယုံပြီလား …
ကာတွန်း စည်သူကျော်ရဲ့ ယုံပြီလား … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၈
ဇင်လင်း ● တတိယအကျော့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအလွန် ရွှေပြည်တော်နှင့် အနီးအဝေး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၁၁ မှ...
မောင်မောင်ကျော် (၈၈) ● ပြန်လည်အမှတ်ရမိနေတဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေ
မောင်မောင်ကျော် (၈၈) ● ပြန်လည်အမှတ်ရမိနေတဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဇာတိမြေသို့ပြန်ရောက်ခိုက်တွင်၊ စာအုပ်ဆိုင်များဖက်သို့ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း၊ ကျနော်တို့သိမှီခဲ့သည့်စာအုပ်အငှားဆိုင်များအကြောင်း အတွေးထဲပြန်ရောက်လာလေသည်။ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ခင်းကျင်းရောင်းချနေသော စာအုပ်အမျိုးအစားများကလည်းများပြားလှပြီး စာအုပ်အရေအတွက်ကလည်း စာအုပ်ပေါင်းထောင်သောင်းချီများလှသည်ဟု ထင်မိသည်။...
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● အောင်ရဲထွေးအမှုမှာ ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားသလဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ (ရန်ကုန်) – လူမှုကွန်ရက်တွင် ဟာသရုပ်သံဖိုင်များကြောင့် လူသိများခဲ့သည့်ကိုအောင်ရဲထွေးသေဆုံးမှုတွင် တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရသူများအား ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈
ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar Now) ● မသန်စွမ်းအမျိုးသမီး မတရားကျင့်ခံရမှု နှစ်လအတွင်း ခြောက်ခုရှိ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ (ရေကြည်၊ ကျောင်းကုန်း) — ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများအတွင်း မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများ ခြိမ်းခြောက်...
ကာတွန်းအောင်မော်ရဲ့ ငါတို့သည် ….
ကာတွန်းအောင်မော်ရဲ့ ငါတို့သည် …. (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● အောင်ရဲထွေးအမှု ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုသည့်အပေါ် ခရိုင်အဆင့်က ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းမည် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန် — လူမှုကွန်ရက်တွင် ဟာသရုပ်သံဖိုင်များဖြင့် နာမည်ကြီးသူ ကိုအောင်ရဲထွေး သေဆုံးခဲ့ရသည့်အမှုတွင်...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ကယ်ကြပါဦး …
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ကယ်ကြပါဦး … (မိုမးခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈
လင်းသက်ငြိမ် ● မိုးရေတွေနဲ့ ကမ္ဘာ
လင်းသက်ငြိမ် ● မိုးရေတွေနဲ့ ကမ္ဘာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ အသံအောက်မှာ အမည်းရောင်တွေ ပြိုကျ လမ်းမီးတိုင်တို့ အရည်ပျော်ကျသလို တဖွားဖွား အိမ်အမိုးများ တိုက်မြင့်ကြီးများ တဖွားဖွား တဖွားဖွား မိုးရေတွေဖွေးနေတဲ့...
စိုးခိုင်ညိန်း ● ကဗျာနဲ့အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်း
စိုးခိုင်ညိန်း ● ကဗျာနဲ့အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဘာတစ်ခုမှ မတွေးတော မဆင်ခြင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ရောက်လာတဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ငေးကြည့်လိုက်၊ မြင်နေရတဲ့ သစ်ပင်တွေမှာ...
ကာတွန်းဆွေသားရဲ့ ဒုက္ခကိုယ်စီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈
မောင်မောင်ကျော် (၈၈) ● ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂ဝ၁၈ ရသခေတ် ပထမတွဲမှာ တခေတ် တခါတုန်းက ကက်ဆက်ခွေဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း ရေးခဲ့ပြီးတော့၊ အခုဒုတိယတွဲမှာ လည်း စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာ...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● နောက်ကစီပါ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂ဝ၁၈ တစ်ရက်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ဘုရားဖူးသွားကြသည်။ စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ ထီးတော်တို့ကို မှန်ပြောင်းဖြင့်အနီးကပ်ကြည့်၍ရသည့်နေရာသို့ ရောက်သွားသည်။ ကြည့်နေသူရှိသည်။ အသက်အစိတ်လောက် ရှိမည်ဟု...
ဆောင်းယွန်းလ ● ရွဲ့စောင်းနေတဲ့ အတည့်များအကြောင်း
ဆောင်းယွန်းလ ● ရွဲ့စောင်းနေတဲ့ အတည့်များအကြောင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၈ ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ကိုယ်မှာ သူတပါးရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို ထိုင်ဖတ်ရမတဲ့လား ဟားတိုက်ရယ်မောရင်း အရူးစာရင်းထဲ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ရေးလိုက်ရုံသာ အဆန်းဆုံးပုံပြင်တွေ ရုံတင်ထားလည်း လတ်မှတ်တိုးပြီး ဝယ်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါ တိုင်ပတ်နေတဲ့...
K ငြိမ်းချမ်း ● သူတို့ပြောတဲ့ နှစ် ၃ဝ ပြည့် ၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံ
K ငြိမ်းချမ်း ● သူတို့ပြောတဲ့ နှစ် ၃ဝ ပြည့် ၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၈ (ကိုလေး – အင်းဝဂုဏ်ရည်၊ အောင်ဇင်မင်း၊ ဆူးငှက်၊ မောင်အောင်ပွင့်၊...
မင်းအဂ္ဂ (ဆင်တဲဝ) ● ဒဏ်ရာကိုလျှာနဲ့လျက်၊ ရှေ့ခရီးဆက်ကြမယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၈ (က) အရုဏ်ဦးက မလာသေး။ ညက နက်နေဆဲ။ ဝါကျင့်ကျင့်မီးလုံးများက လမ်းမီးတိုင်များမှာ မှုန်ရီ မှုန်ဝါးတွယ်ကပ်နေသည်။ ၇၈...